युवावस्थामा लिंग उत्तेजनाको समस्या - Younka Kura
written by YounKaKura January 10, 2018
हाम्रा इन्द्रियहरू दृष्टि, स्पर्श, ध्वनि, गन्ध तथा स्वाद यौनसम्पर्क वा यौनेच्छासँग सम्बन्धित हो भन्ने हामीलाई थाहै छ । यौन उत्तेजनाको स्रोत जे–सुकै भए पनि अन्तिम रूपमा त्यसलाई अर्थ लगाउने र बुझ्ने कुरा मस्तिष्कले नै गर्छ र हामी यौन उत्तेजित हुन्छौं । यसरी यौन उत्तेजित हुन थालेपछि रगत लिंगका धमनीहरूबाट लिंगमा भएको उत्थित हुन सक्ने विशेष तन्तुमा जम्मा हुन थाल्छ भने लिंगबाट रगत बाहिर निस्कने क्रम घट्छ र लिंग कडा, मोटो तथा लामो हुन्छ । यसलाई नै हामी लिंग उत्तेजित भएको भन्छौं ।
कुनै औषधी, नशालु वा लागूपदार्थ प्रयोग गरिएको छ भने त्यसमा परहेज गर्नुपर्छ । त्यस्तो केही छैन भने तपार्इंमा यौनप्रतिको दृष्टिकोण त नकारात्मक छैन र त्यसले कतै ग्लानि वा दोषीपनको सिकार बनाएको छ त छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ । यस्तो केही पनि छैन र यौनसम्पर्क गर्ने बेलामा लिंग खडा नभएर कतै समस्या पो हुन्छ कि भन्ने समस्याले पिरोलेको छ भने उक्त कार्य सम्पादनको चिन्ताको कारणले भएको हो । यस्तो अवस्थामा मुख्य कुरा त तनाव, चिन्ता वा भयलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । आत्मविश्वास बढाउने कार्यतिर लाग्नुपर्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के भने दृढ अठोट तथा धैर्यता यसका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । भावनात्मक तथा प्रणय सम्बन्धका लागि समर्पित भएर प्रयास गर्नुपर्छ । दिक्क अर्थात् बोर भएको स्थितिमा पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ । यस्तो बेला आफ्नो सम्बन्धलाई रमाइलो राख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यमा आफ्नो यौन साथीको सहयोग तथा समझदारी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यौनसाथीको समझदारीपूर्ण सहयोगले मनमा भएको चिन्ता हटाउन अनि आत्मविश्वास जगाउन मद्दत गर्छ । यौन साथीको कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणीले समस्यालाई बढाउँछ । समस्या कायम रहे यौन विशेषज्ञ वा मनोरोग विशेषज्ञको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
यौन ईच्छा हरायो
यौन सन्तुष्टिका लागि लिङ्गको आकार कस्तो हुनुपर्छ ?
Live Counselling – why this happen with me...
Live counselling – जानिराखौ ! मास्टरवेसन (हस्त-मैथुन)के हो...
उत्तेजनाको कडी !
एक बिहानैको सेक्स उत्तम